a na-esekarị nọmba nọmba ikeball - 429jp.info
ịgba chaa chaa elu ike bọọlụ saịtị azum
Ndị ọ bụla ọkachamara na lọtrị na-akwalite echiche “ọtụtụ 최상위 파워 볼 백조 ọtụtụ ndị na – adọrọkarị”. Ndị kwenyere n’echiche a na-eleba anya na nsonaazụ lotto gara aga. Ha na-agụta ọnụ ọgụgụ niile wee họrọ ndị nke dọtara ọtụtụ. A na-akpọ ndị nke kacha adọrọ mmasị “ndị na-ekpo ọkụ.” Dị ka nkwupụta ahụ si kwuo, ebe ọ bụ na a dọtara ha karịa n’oge gara aga, a ga-adọta ha karịa n’ọdịnihu. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị jiri ọnụọgụ ọkụ, ị ga-enwe ohere dị elu iji merie jackpot ahụ. Nkwupụta echiche a nwere ike ijide mmiri? Nọgide na-agụ iji chọpụta.
Iji hụ ma “ọnụ ọgụgụ Powerball a na-ejikarị ese” na-arụ ọrụ, lelee eserese ndị na-adịbeghị anya iji hụ ma ọnụọgụ “ọkụ” sitere n’otu afọ ka “dị ọkụ” n’afọ ọzọ. Yabụ, dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike inyocha ihe niile Powerball na-adọta na 2008 wee hụ ọnụọgụ ole na-adọrọkarị. Ọ bụrụ na a dọtara ọnụ ọgụgụ dị otú ahụ kachasị na 2009, nkwupụta ahụ ga-eme ka ọ dị mma.
Achọpụtara m n’ezie iji hụ ihe nọmba Powerball a na-esekarị na 2008 na 2009. Ha bụ 20, 32, na 49 na 2008. Ha bụ 14, 41, na 50 na 2009. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị gụrụ nọmba ọkụ si 2008, ha agakwaghị ekpo ọkụ na 2009. will gaghị enwe mmeri na ọnụ ọgụgụ ndị ahụ. N’ihi ya, nkwupụta ahụ enweghị ntụkwasị obi.
Enwere ọtụtụ ndụmọdụ cha cha maka Powerball. Nke ọ bụla n’ime ya na-amị mkpụrụ. Fọdụ anaghị eme ya, dịka egosiputara ọnụ ọgụgụ “a na-esekarị ọnụ”. Naanị hụ na ị na-eme nyocha tupu ị na-eme ihe ọ bụla ịgba chaa chaa na ndụmọdụ ndụmọdụ ị nwere ike ịnweta 파워 볼 사이트 추천.
Kedu ihe ọdọ mmiri na klọb ga-emere gị?
N’ime afọ iri nke ịtụfu dollar kwa izu, njikọ ime ụlọ Powerball kwụrụ nnukwu oge maka 22 Kentuckian afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị. Ha bụ ndị ndabara ọma natara nke lọtrị $ 61.5 nde Powerball. Mgbe ụtụ isi gasịrị, onye otu ọ bụla ga-etinye ihe dị ka $ 894,000.
N’afọ gara aga, ndị enyi itoolu Roswell kwuru na UFO ga-ebu ya na New Mexico Powerball, ebe ha kwuru na jackpot kasị elu nke steeti $ 206.9 nde.
N’ikpeazụ, naanị izu gara aga (March 4, 2009), ụwa nụrụ na ndị ọrụ ibe ya iri na New Jersey meriri $ 216 nde Mega Millions jackpot.
Obi abụọ adịghị ya na isonye na lọtrị ma ọ bụ klọb na-eme ka ohere ịnweta mmeri gị bukwuo ibu. Klọọlọ lọtrị na ebe nza ahụ na-enye ndị na-amu amu egwuregwu ohere ka mma, yana ike ịnụ ụtọ ọtụtụ lọtrị ụwa na 최상위 파워 볼 안전 놀이터 nke ha agaghị enwe ike isonye. Ọ dị mfe mgbakọ na mwepụ: ndị ọzọ tiketi ị na-azụ, mma gị Ohere nke na-emeri.
uѕе powerball numbеr analysis tо imрrоvе gị Ohere
Tụlee eziokwu ndị a: A na-atụle klọb na ọdọ mmiri maka akaụntụ 40% nke mmeri mmeri Powerball niile. Nke a na – abụkarị ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ na – enye ihe ruru $ 10 kwa izu. Otu n’ime ọdọ mmiri ndị na-emeri emerila ọrụ kemgbe afọ iri.
Ogige Powerball, nke a makwaara dị ka klọb lọtrị, bụ otu ndị na-etinye ego ha iji zụta ọtụtụ tiketi lọtrị.
Otu ọdọ mmiri Powerball ga-ebido na-arụ ọrụ ma gụnye ndị ọrụ ibe si otu ụlọ ọrụ. Dịka, ọdọ mmiri a na-agba ọsọ site na otu onye na-achịkọta ego, ree tiketi, ma kesaa mmeri.
Ọ bụrụ na tiketi lọtrị na-efu $ 1 na nke ọ bụla nke 최상위 파워 볼 게임 ọdọ mmiri iri na-emefu $ 20, ndị otu ahụ ga-ekewa mmeri na tiketi 200. Onye obula ga – anata 10% nke mmeri mgbe enyechara 10% nke ego.
Ọ bụrụ n’onye so na ọdọ mmiri Powerball ma ọ bụ klọb ma ọ bụ chọọ isonye n’ọdịniihu, gbaa mbọ hụ na ị nwere nkwekọrịta, ọbụlagodi n’edemede, na onye na-elekọta ya. Ihe ederede kwesiri ka akwado ya ma edeputa ya, mana nke a adighi eme. Enweela nghọtahie ndị gara aga gbasara nkesa nke mmeri, yabụ jiri ezi uche mee ihe tupu ịzụrụ.
Y’oburu n’inwe nkwekorita nkwekorita, me ya n’ihu mmadu niile no n’ime mmiri. Ruo mgbe etinye ego na ọdọ mmiri n’ịntanetị, gụọ nkebiahịrị na usoro niile. Ọ ga-azọpụta gị ọtụtụ oge na nsogbu n’ọdịnihu.
Ulo akwukwo egwuregwu egwuregwu North Carolina kacha elu na akwukwo
Gọvanọ steeti North Carolina ji mpako hiwe usoro agụmakwụkwọ lọtrị. Emepụtara ya iji nyere aka na mpaghara agụmakwụkwọ na-enyere steeti na ndị obodo ya aka, dịka iwu ụlọ akwụkwọ ọhụrụ na inye ego nke onyinye agụmakwụkwọ na mmemme agụmakwụkwọ. Ebe ọ bụ na ọ bụ mgbakọ na-agba ọsọ, onye ọ bụla nọ na North Carolina ga-enwe ike isonye, ​​na ntinye ahụ bụbu arụmụka mana mechara bụrụ iwu.
Usoro agụmakwụkwọ Powerball NC na-agba ọha na eze ume igwu n’ọtụtụ asọmpi a kara aka, yana ire tiketi lọtrị na-erite uru maka ọrụ ebere. Onye ọchichọ obi uto na-anata ọkara nke ego akwụpụtara na lọtrị. Enwekwara ego iji kwụọ ụgwọ ka usoro ụlọ akwụkwọ NC lọtrị rụọ ọrụ, ma mgbe ebubo ndị ahụ, a na-ekesa 35% niile nke ego niile maka ọrụ iji melite ogo mmụta na mpaghara.
Na mgbakwunye, olee otu mmadụ ga-esi azụta tiketi? Dịka ọmụmaatụ, otu n’ime ụlọ ahịa 5,500 na-enye tiketi maka lọtrị mmemme agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ NC nwere ike ịchọta na North Carolina. Nke a gụnyere egwuregwu kpụ ọkụkụ dị ka Carolina Pick 3, Carolina Pick 5, Powerball, na Sizzlin ‘Millionaire Raffle, yana egwuregwu vidiyo dịka Carolina Pick 3, Carolina Pick 5, Powerball, na Sizzlin’ Millionaire Raffle. Iji chọta ụlọ ahịa, chọọ naanị ihe ịrịba ama nke na-ekwu, Gwuo EBE A.
Ndị ahụ zụtara tiketi lọtrị ga-echezi ile ihe omume tiivi nke a ga-esi na lọtrị niile adọta. Ihe ngosi a gosipụtara site na ụlọ ọrụ TV ndị na-ekere òkè bụ ndị sokwa na sistemụ ahụ. Ihe niile achọrọ bụ ịtụle ọnụ ọgụgụ adọtara na tiketi a zụtara.
I nwere ụbọchị 90 iji chịkọta ihe mmeri gị ma ọ bụrụ na ị merie Powerball. Mgbe ekpughere nọmba mmeri, elekere ụbọchị 90 ga-amalite. N’egwuregwu Powerball, ndị egwuregwu nwere ụbọchị 180 iji chịkọta ego ha, yana ebe ọ bụ egwuregwu dị n’ịntanetị, ọ ga-ewe ndị mmadụ oge tupu ha abanye ebe ha nwere ike ịgbapụta ihe nrite ha.
Ndị na-egwu egwu ga-abanye aha ha na aha ha na nọmba ha. Nke a dị mkpa maka na ọ na-akwụsị onye ahụ bidoro ịnata ihe nrite nke onye ọ bụla ọzọ meriri. Ebe ọ bụ na nke a abụghị ihe nkịtị, ọ ga-adị mma ịkpachara anya karịa nwute.
Egwuregwu agụmakwụkwọ Powerball NC dịịrị naanị ndị dịkarịa ala 18 afọ. Na mgbakwunye, a na-ere ha naanị na nnukwu ụlọ ahịa. A ghaghị ịzụta tiketi Powerball n’onwe gị, ọ bụ ezie na a na-eme ihe omume ahụ n’ịntanetị.
North Carolina bụkwa 최상위 파워 볼 추천 토복 이 naanị steeti dị n’ọwụwa anyanwụ nwere sistemụ Powerball nke ụlọ akwụkwọ. Achọghị ka ịtụ vootu ma ọ bụ banye na iwu, mana North Carolina dị njikere ịme ya n’ihi enweghị ndị mmegide abụọ. Usoro agụmakwụkwọ NC dabere na lọtrị, n’aka nke ọzọ, yiri ka ọ na-erite uru na akụ na ụba.